निरोगी जीवनका लागि योग
Purba Sandesh	१६ आश्विन २०७८, शनिबार	79 Views
योग शब्दको शाब्दिक अर्थ जोड भन्ने हुन्छ । आत्माको परमात्मासित संयोजन गर्नु नै योग हो । तर अहिले योगको परिभाषा बदलिएको छ ।
अहिले मानिसहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक समस्याले सताएको छ । यस अर्थमा अहिले मनसँग शरीरको जोडलाई नै योग मान्ने गरिएको छ । यसर्थ शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा शान्त र आध्यात्मिक रूपमा उच्च चेतनायुक्त भएर जिउने कलालाई नै योग भनिन्छ ।
योग स्वस्थ व्यक्तिका लागि जीवन पद्धति र योगीहरूका लागि साधनापद्धति हो । यस अर्थमा योग सबैका लागि हो । योगका विभिन्न फाइदाहरू हुन्छन् । त्यसमध्ये मुख्य फाइदाहरू तल उल्लेख गरिएको छ ।
क्यान्सरको जोखिम कम गर्न,
मानसिक स्वास्थ्यका लागि,
तनाव कम गर्न,
खानपानमा सुधारका लागि,
शारीरिक लचकताका लागि,
यदि तपाईं उत्तम किसिमले योग गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि केही नियमको पालना गर्नैपर्छ ।
कुनै पनि गुरुको निर्देशनमा योगको अभ्यास गर्नुहोस्
सूर्याेदय वा सूर्यास्त समयमा योग गर्नुहोस्
योग गर्नुभन्दा पहिले अनिवार्य नुहाउनुहोस्
योग खाली पेटमा गरौं, योग गर्नुभन्दा कम्तीमा २ घण्टा पहिले खानेकुरा नखाऔं
आरामदायक सूचीको कपडा पहिरिऔं
तन जस्तै मन पनि स्वस्थ राखौं ।
निरन्तर योग अभ्यास जारी राखौं ।
योग गरेको ३० मिनेटसम्म केही पनि खानेकुरा नखाऔं
प्राणायाम सधैंभरि आसन अभ्यासपछि मात्रै गरौं
योगासनको अन्तमा सधैं शवासन गरौं
योगको कुल ४ वटा प्रकार हुन्छ । ती निम्नानुसार छन् ।
राजको अर्थ शाही हो र योगको यस शाखाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो, ध्यान । यस योगको आठ अंगहरू छन् । यही कारणले नै पतञ्जलिले यसको नाम नै अष्टांग योग राखेका छन् । यसलाई पतञ्जलिले योग सूत्रमा पनि उल्लेख गरेका छन् । यसका आठ अंगमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि रहन्छन् । राज योग आत्मविवेक र ध्यान गर्नको लागि तयार व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने स्वभावको हुन्छ ।
अघिल्लो शाखा कर्म योग वा सेवाको मार्ग हो । हामीमध्ये कोही पनि यो मार्गबाट बच्न सक्दैनौं । कर्म योगको सिद्धान्त यो हो कि जो हामी अनुभव गर्नेगर्छाैं । त्यो हाम्रो कार्यद्वारा निर्देशित हुन्छ । यसका बारेमा जागरुक हुनुले हामी वर्तमान र भविष्यलाई राम्रो बाटोमा डोहो¥याउन सक्छौं । कर्म आत्मआरोही कार्यको मार्ग हो । जब हामी आफ्नो कर्ममा लीन हुन्छौं भने आफ्नो जीवन निस्वार्थ रूपले अर्काेको सेवामा समर्पित गर्छाैं । त्यसैलाई हामी कर्म योग भन्ने गर्छाैं ।
भक्ति योग भक्तिको मार्गको वर्णन हो । भक्ति योग सृष्टिमा परमात्मालाई देखेर भावनालाई नियन्त्रण गर्ने एक सकारात्मक तरिका हो । भक्तिको मार्गले हामी सबैको लागि स्वीकार्यता र सहिष्णुता पैदा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गर्छ ।
यदि हामी भक्तिलाई मनको योग मान्छौं भने ज्ञान योगलाई बुद्धिको योग मान्ने गर्छाैं । ऋषि या विद्वानको मार्ग ज्ञान मार्ग हो । यस पथमा चल्नको लागि योगलाई ग्रन्थ र ग्रन्थ अध्ययनको माध्यमबाट बुद्धि विकासको आवश्यकताका रूपमा मान्ने गरिन्छ । ज्ञान योगलाई सबैभन्दा कठिन मार्ग पनि मान्ने गरिन्छ । साथै, यो सबैभन्दा प्रत्यक्ष मार्ग पनि हो ।
योग गर्ने सही समय के हो ?
योग गर्नको यही समय भनेर तोकिएको हुँदैन । यदि दिनको कुनै पनि समय आफूलाई फुर्सद मिल्छ त्यही समयमा योग गर्न सकिन्छ । सकेसम्म बिहान र साँझको समय योगको लागि उपयुक्त मान्ने गरिए पनि जुनसुकै समयमा पनि योग गर्न भने सकिन्छ । हामी कुनै पनि ठाउँमा रहेको खाली जग्गामा योग गर्न सक्छौं । तर कुरा यति हो कि हामी जहाँ भए पनि खुलेर सास लिन सक्ने ठाउँ चाहिन्छ ।
योगाभ्यासको समयमा सही मानसिक स्थिति के हो ?
हामी जुन आसनमा योग गरिरहेका छौं, त्यसमा गहिरो रूपले ध्यान दिनु आवश्यक छ । शरीरको जुन अंगमा सो आसनको सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्छ, सोही हाम्रो एकाग्रता केन्द्रित गर्नको लागि प्रयोग गरौं ।
आसन अनुसार श्वासप्रश्वासको तरिका बदल्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि यसको बारेमा पूर्ण ज्ञान छैन भने आफूलाई जस्तो योगाभ्यासको ज्ञान छ सोही अनुसार गर्नु राम्रो हुन्छ ।
योगको सुरुवात गर्नेहरुको लागि सुझाव
योगको सुरुवात गर्नेहरूले नियमित धैर्य र दृढताका साथ योगाभ्यास गर्नुपर्छ । यदि शरीरमा लचिलोपन कम छ भने सुरुवातमा अधिकतर आसन गर्नमा कठिनाइ हुन सक्छ । यदि पहिले नै आसन राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनौं भने पनि यसमा कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन ।
योगको क्रममा शरीरलाई जबरजस्ती मर्काउने र भाँच्ने गर्नुहुन्न
सुरुवातमा केवल त्यही आसन गर्नुपर्छ जुन सजिलै गर्न सकियोस् । यति कुरामात्रै ध्यान दिनु पर्छ कि हाम्रो श्वास लयबद्ध हुनुपर्छ ।
सुरुवातमा एउटा आसन सकेपछि केही समय आराम गरेर मात्रै अर्काे आसन सुरु गरौं । यस्तो विश्राम कति समय गर्ने भन्ने शरीरलाई आवश्यकताको आधारमा तय हुन्छ ।
Purba Sandesh २७ कार्तिक २०७८, शनिबार
कपाल झर्न नदिन के गर्ने ?
Purba Sandesh २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार
जटामसी औषधीय गुणले भरिपूर्ण